Yiyiphi imithombo enokundinceda kakhulu ngeDoF ngokulandela i-backlinks?
Ukufuna iiwebhsayithi okanye iiblogi eziza kuba zilungele ukwenza iDoF ngokulandela i-backlinks, mhlawumbi unokucinga ngebhulogi yokubeka ingxelo, ukuthunyelwa kwabamenywa, ukuthumela izikhokelo kunye nokufakwa kwezihlomelo zoshishino, kwaye njalo. Ngokuqinisekileyo, unokufumana izicombululo ezintle ezifanelekileyo kwizakhiwo eziphezulu zekhonkco. Kodwa ingongoma, ngaba kukho naziphi na izisombululo eziza kuba zilungileyo kwiDoF ngokulandelelanayo? Ndinezinye iinkalo zendawo.
Kodwa ngaphambi kokuphonononga ngamnye wabo, makhe siqale ngokufutshane. Emva koko, kutheni ufanele ube nazo kwiwebhusayithi yakho okanye kwiblogi? Ukwenza okusemandleni akho ukufumana i-DoF ngokulandela i-backlinks, yiziphi iintlobo esinokuzilindela ngokucacileyo kuzo?
IiNcedo eziMnandi zeDoFi emva kwee-Backlink
zanda ukukhangela i-Traffic eqhutywe ngqo kwiwebhusayithi okanye kumaphepha eblogi;
iGunya loLwazi oluLomeleleyo linika ukunyuswa okusisigxina kwinkqubo yakho yokusebenza kwiprojekthi;
ukuphakamisa i-AdSense CPC (indleko ngokuchofoza nganye);
ukukhuthaza inkqubela yakho eqhubekayo ngeGoogle PageRank;
ukuphucula ii-Rankings zakho zeeNjini zeNgcaciso zangoku kwaye ulungele ukuqhubela phambili kwakho.
Kukho malunga neendawo ezili-10 eziphezulu ezilindelekileyo ukuba zifanelane nawe kakuhle kwiDoF. Phakathi kwezinye, ndingathanda ukucacisa izixhobo ezilandelayo kwi-intanethi njengoko mhlawumbi iindawo ezifanelekileyo zokuba ne-kickass ziqale ukukhawulelana nomxholo weDoF. Ngezantsi ndiza kuqala ngeGoogle Plus, i-YouTube, LinkedIn, ukugqiba nge-Blogger dot com. Ngoko, masihlawule kumcimbi!
Ukuba enye yeewebhu ezidumileyo kwi-Social Media, iGoogle Plus kufuneka yaziwa njengendawo ephambili yoluntu ukuqhuba ukukhuthazwa okufanelekileyo kwiwebhusayithi yakho okanye kwiblogi. Ndikholelwe okanye akunjalo, kodwa ngenxa yezizathu ezithile, le nkonzo esebenzayo ye-giant search world inokubonakala ibonwa phantsi ngabaninzi be-webmasters nabasayithi. Nangona kunjalo, ndincoma ukuba uzame iakhawunti yakho yangaphandle-ukuzonwabisa kwiDoF esemgangathweni ye-backlink enegunya eliphezulu nje ngemizuzu.
Le ndlela yokubamba ividiyo ngokubanzi kakhulu ingasetyenziselwa ukufumana ezinye i-backlinks ezongezelelweyo - nje ukudala isiteshi sakho kwaye ugcwalise "icandelo". Ukwenza ngale ndlela, nangona kunjalo, unako kuphela u-NoFlandela i-backlinks. Ukuze ufumane i-backlink eyigugu ngakumbi neDoF, uza kufuneka ukhangele izicwangciso zesiteshi esiphezulu. Ngaloo ndlela, nqakraza kwi "website ehambelana" kwaye ubeke i-URL yewebhusayithi yakho kuphela. Qaphela, ukwenza inkohliso isebenze ngokufanelekileyo, kuya kufuneka udlule inkqubo yokuqinisekisa kwiziko lakho lewebhu le-Google Webmaster Tools.
Akuyona nje indawo efanelekileyo yokwenza uxhulumano oluninzi lwezobudlelwane bobugcisa kunye nezoshishino, kodwa ithuba elihle lokuba ne-backlinks ephakamileyo yamagunya - kwaye anokuboniswa abasebenzisi abanomdla kuzo zonke ihlabathi. Kwaye awufuni ukuliphosa, akunjalo? Ukudala enye i-backlink nge-DoF ye-Attribute kwi-LinkedIn - yenza nje iphrofayili yakho, sebenzisa imizuzu emibini ukuzalisa amacandelo afanelekileyo, kwaye wabelane ngethungelwano kumzekelo webhokisi yakho, ukuphononongwa kwemveliso, njl.Ngale ndlela, mhlawumbi nayiphi na into enxulumene ngayo iya kuba yinto ebalulekileyo. Impumelelo, ewe?
I-Blogger dot COM
Le nqonga yokubloga ayikho into edumileyo, kodwa ndiyakugxininisa ukuba uyihlosele phantsi kweyiphi na imeko. Nantsi indlela ongayifumana ngayo i-backlink neDoF ngaphandle ngaphandle nje - vela ibhulogi yakho entsha yokuxhasa kwi-Blogger dot com, kwaye uhlawule ixesha lokuligcwalisa ngomxholo wesandi Source . Qhagamshelana newebhusayithi yakho yebhsayithi ebalulekileyo okanye iblogi - kwaye uyenziwe!